Sawirro: Sida loo xusay maalinta Jacaylka Dunida - BBC Somali
Sawirro: Sida loo xusay maalinta Jacaylka Dunida
14 Febraayo 2014
Sida loo xusay maalinta Jacaylka Dunida
Dad u ololeeya dhaqanka dalka Hindiya ayaa dhigay dibedbaxyo looga soo horjeeda xuska maalinta Jacaylka Dunida, waxay ku tilmaameen duulaan ka dhan ah dhaqankooda.
Xaflad ay dad badan hal mar wada arrosayeen oo lagu qabtay magaalada Manila, dalka Philippine. Xafladda waxaa soo agaasimay hay'ad maxalli ah, waxaana lagu xusayay maalinta Jacaylka Dunida ee Valentine's Day
Haweenaydan 98 ubax ayay u diyaarisay xuska maalinta Jacaylka Dunida.
Libaaxyadan kuwa Afrika ah waxay ku cayaarayaan sawir gacmeed wadno ah oo laga sameeyay dhigga faraska oo la xargajiyay.
Ninkan waxaa uu galayaa dukaan lagu iibiyo waxyaabo loogu talagalay in loogu dabbaaldego maalinta Jacaylka Dunia
Haweeney Muslin ah oo agmaraysa dukaan lagu iibiyo waxyaabo loogu talagalay in loogu dabbaaldego maalinta Jacaylka Dunia, in kasta oo maalintan ay tahay mid dadka Kiristaanku dabbaaldegaan, haddana Muslimiinta Indonesia way xusaan.